जीवन सँगी छुट्टाइदिने चलनविरुद्ध उठ्न आह्वान गरिएको गीत (भिडियोसहित) | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
जीवन सँगी छुट्टाइदिने चलनविरुद्ध उठ्न आह्वान गरिएको गीत (भिडियोसहित)
access_time२०७७ साल असार ५ गते, शुक्रबार ०२:४४ PM chat_bubble_outline Comments folder_open मनोरञ्जन भिडियो
असारे बाढी साउने झरी भीरपाखा वनभरी
आउँदैछ्न् फेरि ती काला दिन एक्लो जीवनभरी
यो कालो मैलो फातेको साडी आङमा बेर्दैछु
आउँछ कि अझै परदेशी भनी दोबाटो हेर्दैछु
आएन परदेशी फेरि पनि लाग्यो बरिखा...
वर्षा लागेको छ, खेतीपातीको मौसम सुरु भएको छ। तर, परदेश गएको खसम अझैसम्म घर फिरेको छैन । ‘अर्को बरिखासम्म त जसरी नि आउँछु प्रिया’ भनेर गरेको बाचा उसले यसपटक पनि पूरा गर्न सकेन । बिरानो मुलुक, बिरानो ठाउँ, बिरानो काम, बिराना मान्छे, बिराना नियम कानुन, थाहा छैन परदेशमा खसम समस्याको भुमरीमा कसरी छट्पटिइरहेको छ ? यता उसकी एक्ली जहानको मनमा भने बिछोडको पीडाले अत्यासलाग्दो हुण्डरी चलाइरहेको छ ।
वर्षायामले खेतबारीका कान्लाहरुमा हरियालीको बहार त ल्याएको छ । तर, परदेशी खसमको सम्झनामा रुमल्लिइरहेकी दुःखी चेलीको मनमा भने हरियाली छाउन सकेको छैन । कहिले आउँला परदेशी खसम भनी उनले बाटाभरी आँखा बिछ्याइरहेकी छिन् । यसरी मनभरी पीर व्यथाको भारी बोकेर जिउन बाध्य भएका असङ्ख्य नारीहरु छ्न् नेपालमा । तिनै नारीहरुको अन्तर हृदयको आवाज लिएर आएकी छिन् जनगायिका निलिमा पुन ।
आँखाको झरी सुकेन कहिल्यै सम्झेर नयाँ दिन
हृदयभरी सल्केको आगो हुर्कियो झन्का झन्
चर्केको घाममा मकै बारीमा बाउसो बजारेर
सुस्ताउँछु एकछिन बारीको डिलमा पसिना झारेर
मनका पीर व्यथाहरु आँखाबाट झरी बनाई बगाउन बाध्य छन् परदेशी खसमका जहानहरु । चर्को घाममा बाउसो बजारिरहेका हुन्छ्न् उनीहरुको हातले । तर बाहिरी घामको तापभन्दा भित्री मनको पीडाको ताप झनै चर्को छ । आखिर जीवन साथीसँग बिछोडिएर बस्नु पर्ने यो थिति कहिलेसम्म रहला ? हितैको सँगी छुट्टिनु पर्ने यस्तो चलनको अन्त्य कहिले होला ? हृदयभित्रको आगो झन् झन् दन्किरहेको हुन्छ ।
यस्तै दर्दनाक पीडा लिएर बाँच्न बाध्य धेरै नारी छ्न् हाम्रो देशमा । देशभित्रै रोजगारीको अवसर पाएको भए कोही पनि नेपाली कामको खोजीमा सायद बिरानो मुलुकतिर भौतारिने थिएनन् । तर, हाम्रो देशको व्यवस्थानै त्यस्तै छ । यहाँ रोजगारीका प्रसस्त आधारहरु छैनन् । परिवारको जीविकोपार्जनका लागि आफ्नो मातृभूमि छोडेर परदेशिन बाध्य छ्न् लाखौं लाख नेपालीहरु ।
बाध्यताको भुमरीमा परेर बिरानो मुलुकमा आँसु, पसिना र रगत बगाइरहेका तिनै परदेशी खसमहरुका स्वदेशमा रहेका जहान परिवारको मर्मस्पर्शी व्यथा बोकेको गीत हो– आएन परदेशी । जनगायक जीवन शर्माको शब्द तथा संगीतमा रहेको यो गित पहिलो पटक २०४७ सालमा रिकर्ड भएको थियो । त्यसमा देउमाया श्रीषले स्वर दिएकी थिइन् । रक्तिम परिवारको जनगीति यात्रा भाग–२ मा समाबिष्ट रहेको छ यो गीत । अहिले फेरि बिबी अनुरागीको म्युजिक एरेन्ज र जनगायिका निलिमा पुनको सुमधुर स्वरमा यो गित २०७७ असार ३ गते पुनः जनसमक्ष आएको छ, जीवन शर्माको युट्युब च्यानलबाट ।
गीतको भिडियो वसन्त ढुंगाना र विनय थापाको छायांकन रहेको यो गीतको भिडियोमा गुल्मीकी ज्योति पुन र बागलुङ (हाल जापान)का प्रकाश बिसी ‘बादल’ले अभिनय गरेका छ्न् । भिडियोको सम्पादन तुलसी बाँस्कोटाले गरेका छन । सामान्य मोबाइलका क्यामराबाट खिचिएका गीतको भावअनुसारका दृश्य भिडियोमा समेटिएका छ्न् ।
भिडियोमा गाउँमा मेलापात गर्दाका वास्तविक दृश्यहरुनै समेटिएका छ्न् । लिप्सिङका दृश्यहरु काठमाडौंकै गाउँमा गएर लिइएको छ । शब्द, स्वर, संगीत, अभिनय, सम्पादन कतै खोट लगाउन मिल्ने ठाउँ देखिँदैन । सबैभन्दा मुख्य कुरा त गाउँले नारीको यथार्थ बेदना बोकेको जनगायक जीवन शर्माको यो गीतको भाव पक्ष सशक्त छ ।
गीत ३६ वर्षअघि लेखिए पनि अहिले पनि यो गीतको सान्दर्भिकता उत्तिकै छ । गीतको रचनाकाल स्मरण गर्दै जनगायक शर्मा भन्छन्, ‘पञ्चायती कालरात्रिको समय थियो, त्यस्तै २०४१ सालतिरको घटना हो । बागलुङ गल्कोटको गल्याङ भन्ने स्थानमा यदुमणि सरको घरमा म भूमिगत रुपमा छिपिरहेको थिएँ । वर्षायामको बेला थियो । त्यो बेला त्यहाँ गाउँका पुरुषहरु धेरै परदेशतिर गएका थिए । मेलापातको काममा महिलाहरुनै बढी देखिन्थे । ती महिलाहरुको अवस्थालार्इ देखिसकेपछि यो गीतको सृजना गरिएको थियो ।’
आफ्ना जहान लालाबाला पाल्नैका लागि परदेशिनुपर्ने थितिविरुद्धमा जनतालाई जागृत पार्ने उद्देश्यका साथ यो गीतको रचना गरिएको शर्मा बताउँछन् । साच्चै यो गीतले समस्याको उजागर मात्र होइन समाधानको स्पष्ट मार्गचित्र पनि दिएको छ
कसरी गयो छोडेर गाउँ कसले पठायो
यो मुटु लुछी कसले उसलाई नौडाडा कटायो
हितको जोडी छुट्टाइदिने यो दुष्ट चलन
हजारौ चेली उठ्नेछौं भोलि यो थिति फालन...
परदेशिनु रहर होइन बाध्यता हो । आफ्ना जहान, लालाबाला, बाबा आमा, आफू जन्मेको माटो चटक्कै छाडेर विदेशिने रहर त कसलाई हुन्छ र ? देशभित्रै रोजगारीको अवसर पाउने हो भने कोही पनि नेपाली सायद परदेशिने थिएनन् । त्यसकारण उनीहरुलाई परदेशिन बाध्य पारेको भनेको यहाँको राज्य व्यवस्थाको असमान नीतिले हो । रेमिटेन्सबाट नै देशको अर्थतन्त्र धानिँदा खुशी हुने हाम्रा शासकहरुको परजीवी सोचका कारण, देशमा कलकारखानाहरुको विकास नगरिएका कारण त्यसरी विदेशका विभिन्न ठाउँमा पुगेर आफ्नो रगत र पसिना बगाउन बाध्य भएका हुन् नेपालीहरु ।
रोजगारीका लागि परदेशिन बाध्य हुने यो थिति, यो नियम अब बदल्नु जरुरी छ । तर त्यो थिति त्यति सजिलै बदलिने छैन । त्यसका लागि जनताले नै सशक्त दबाब सिर्जना गर्नु पर्नेछ । हितैको सँगी छुट्टाइदिने यो दुष्ट चलनलाई फाल्नका निम्ति लाखौं लाख चेलीहरु पनि आन्दोलनको मैदानमा लामबद्ध हुनुपर्नेछ । त्यसरी जनस्तरबाट सशक्त दबाब सिर्जना गर्न सकियो भने मात्र यो थिति बदल्न सकिने छ ।
यो गीतले मुलतः त्यही सन्देश दिएको छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण चेतनामुलक गीतलाई नयाँ परिवेशअनुसार फेरि गाएर जनसमक्ष ल्याएकोमा जनगायिका निलिमा पुनलाई हार्दिक धन्यवाद । प्रगतिशील सांस्कृतिक आन्दोलनमा गीत र संगीतका अझ नयाँ नयाँ खजनाहरु थपिँदै जाऊन्, जनगायिका निलिमा पुनको जनसंगीत यात्राले सफलताको शिखर चुम्दै जाओस् हाम्रो हार्दिक शुभकामना पनि ।